चीन एलजी लिथियम ब्याट्री इलेक्ट्रिक स्कूटर १३ इन्च बिजुली स्कूटर वयस्क निर्माता र आपूर्तिकर्ता | हाइबा
एलजी लिथियम ब्याट्री इलेक्ट्रिक स्कूटर १३ इन्च बिजुली स्कूटर वयस्क
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाइँ को लागी हेर्नु पर्छ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को वजन किन्नु भन्दा पहिले एक लोड गर्ने क्षमता। त्यहाँ बच्चाहरु र वयस्कहरु को लागी 250 पाउन्ड सम्म को वजन को लागी ई स्कूटर को टन उपलब्ध छ। यदि तपाइँ एक औसत वयस्क भन्दा भारी हुनुहुन्छ, हामी अत्यधिक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लागी भारी सवार को लागी बनाईएको छ को लागी सिफारिश गर्दछौं।
प्रश्न उठ्न सक्छ किन तपाइँ भारी तौल को लागी एक विशेष स्कूटर को आवश्यकता छ? यो किनभने इलेक्ट्रिक स्कूटर बस हल्का मानिसहरु को लागी यात्रा वा छिमेकी संग सवारी गर्न को लागी बनाइएको छ। प्रत्येक इलेक्ट्रिक स्कूटर यसको आफ्नै शक्ति छ र यसको अधिकतम प्रदर्शन प्रदान गर्न को लागी सीमा छ तर अत्यधिक दबाव संग; यो प्रभावित हुन्छ र सवारी प्रदर्शन मा कम उत्पादन गर्दछ।
१ टुक्रा मूल्य: 2225 USD प्रति टुक्रा
सामाग्री प्रबलित फलाम + एल्युमिनियम मिश्र धातु
आकार खोल्दै १५8*३**१३५ सेमी
तह आकार 160*38*60 सेमी
प्याकिंग आकार १3३*४१*C४ सेमी
तौल NW: 68KG /GW: 78KG
अधिकतम गति 100-150 किमी/घन्टा（65MPH-80MPH）
अधिकतम लोड २०० केजी
(ब्याट्री अनुसार तपाइँ छनौट गर्नुहोस्)
100-110KM (40Ah ब्याट्री)
120-140KM (60Ah ब्याट्री)
15०-160KM (70 एएच ब्याट्री)
ब्याट्री सेल 21700
टायर आकार १३ इन्च रोड टायर
भिगोने प्रणाली हो (अगाडि र रियर स्प्रिंग ड्याम्पिंग)
हाइड्रोलिक ब्रेक हो (अगाडि र रियर हाइड्रोलिक तेल ब्रेक)
एलईडी बत्तीहरु हो (U7 बत्ती*3 + मोटरसाइकल हर्न)
USB पोर्ट हो
विधि सुरु गर्नुहोस् कुञ्जी स्विच/विरोधी चोरी स्विच-दुई मध्ये एक (पूर्वनिर्धारित कुञ्जी) छान्नुहोस्
प्याकेज स्कूटर x1, चार्जर x1, प्रयोगकर्ता पुस्तिका x1
वैकल्पिक १: पूर्वनिर्धारित सडक टायर (हाल मात्र सडक टायर)
२: अपग्रेड प्रवाह बायाँ र दायाँ मोड संकेत (+6USD)
3: सीट (+20USD)
4: पोल कभर एलईडी बत्ती स्थापना (+60USD)
5: एलईडी आवरण प्रकाश को स्थापना (+35USD)
तल 10 अमेरिकी राज्यहरु र शहरहरु र उनीहरुको नियमहरु छन्।
1. न्यूयोर्क राज्य
तपाइँ एक वैध कक्षा M/MJ वा कक्षा १ चालक लाइसेन्स कानूनी रुपमा न्यूयोर्क राज्य मा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर सवारी गर्न को लागी राख्नु पर्छ। दर्ता आवश्यक छ र सामान्यतया एक न्यूयोर्क मोटरसाइकल लाइसेन्स को रूप मा एकै आवश्यकताहरु लाई पछ्याउँछ। न्यूयोर्क को राज्य मा, एक वैध बीमा तपाइँ सार्वजनिक सडकहरुमा तपाइँको स्कूटर को सवारी को लागी आवश्यक छ। एक पटक तपाइँको स्कूटर दर्ता भयो, निरीक्षण गरीयो र तपाइँसँग एक इजाजतपत्र छ, तपाइँ कानूनी रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न को लागी तयार हुनुहुनेछ।
२. न्यूयोर्क शहर
२००४ मा, सिटी काउन्सिलले सबै इलेक्ट्रिक स्कुटरहरुलाई सार्वजनिक सडकहरुमा सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगायो। उनीहरुले घोषणा गरे कि यस्ता सवारी साधनहरु प्रयोगकर्ताहरु, शहरी बासिन्दाहरु, यात्रुहरु, पैदलयात्रीहरु र नजिकैका सवारी साधनहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षा को लागी एक खतरा हो।
सवारी बाहेक, शहर मा एक व्यक्ति को लागी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को बिक्री, लीज वा भाडामा निषेध गरिएको छ। यदि तपाइँ कानून को उल्ल्घन गर्नुहुन्छ, एक आगन्तुक को रूप मा तपाइँ एक पहिलो पटक अपराध को लागी $ 1,000 भन्दा बढी जरिवाना र पछि उल्ल for्घन को लागी $ 2,000 तिर्न बाध्य हुनुहुनेछ।
3. जर्सी शहर
सडक कानूनी स्कूटर, आकार को बावजूद, जर्सी शहर मा संचालित गर्न को लागी दर्ता र शीर्षक हुनु पर्छ। तिनीहरू सामान्यतया मोटरसाइकल को रूप मा व्यवहार गरीन्छ र सामान्यतया शीर्षक र दर्ता को समयमा यस्तो रूपमा ट्याग गरीन्छ। सहर भित्र सार्वजनिक सडकहरुमा उनीहरुलाई कानूनी रुपमा सवारी गर्न को लागी, उनीहरु एक उत्सर्जन परीक्षण पास र न्यूनतम सुरक्षा आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्नु पर्छ। तपाइँ एक मान्य मोटरसाइकल लाइसेन्स जर्सी शहर मा तपाइँको बिजुली स्कूटर सञ्चालन गर्न को लागी आवश्यक पर्दछ। सबै सवारहरु २५ माइल प्रतिघण्टा भन्दा बढि हुनु हुदैन, सबै ट्राफिक नियम र नियमहरु को पालन गर्नु पर्छ, एक अनुमोदित, प्रतिबिम्बित हेलमेट लगाउनु पर्छ, र यातायात को प्रवाह संग सडक को दाहिने छेउमा ड्राइभ।
मोपेड र इलेक्ट्रिक स्कूटर इलिनोइस मा सार्वजनिक सडकहरुमा सीमित संचालन को लागी लक्षित छन्। यदि तपाइँ राज्य को सार्वजनिक सडकहरु मा आफ्नो बिजुली स्कूटर सवारी योजना बनाइरहनुभएको छ, राज्य कानून तपाइँ एक वैध चालक लाइसेन्स धारण गर्न को लागी र सबै सडक संकेत र ट्राफिक कानूनहरु को पालन गर्न को लागी आवश्यक छ। दर्ता र शीर्षक इलिनोइस रोडवेज मा तपाइँको मोटरसाइकल वा बिजुली स्कूटर संचालन गर्न को लागी आवश्यक छ। दर्ता व्यक्ति, अनलाइन वा तपाइँको स्थानीय राज्य सचिव (एसओएस) कार्यालय मा मेल मा गर्न सकिन्छ।
राज्य कानून को अतिरिक्त, शिकागो शहर मा, बिजुली स्कूटर को सवार मात्र शहर को सडकहरु र राजमार्गहरु मा संचालित हुन सक्छ जहाँ सवारी आवागमन को अनुमति छ। यदि तपाइँको स्कूटर ठीक संग दर्ता छैन, तपाइँ शहर मा संचालित गर्न को लागी अनुमति छैन। तपाइँ एक वैध चालक लाइसेन्स र बीमा हुनु पर्छ। मोटरसाइकल जस्तै, इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु पार्कवे मा वा छेउमा पार्कि from गर्न प्रतिबन्धित छन्। तपाइँ सबै खडा र पार्किंग नियमहरु को पालन गर्नु पर्छ कि अन्य वाहनहरुमा लागू हुन्छ।
फ्लोरिडा मा, ड्राइवरहरु कम्तिमा १ years बर्ष पुरानो हुनु पर्छ र फ्लोरिडा राज्य मा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर सवारी गर्न को लागी एक वैध कक्षा ई चालक लाइसेन्स हुनु पर्छ। कुनै दर्ता, बीमा वा लाइसेन्स प्लेट आवश्यक छैन। प्रत्येक शहर ड्राइभरहरु लाई मात्र केहि स्थानहरु मा आफ्नो मोटरसाइकल स्कूटर सवारी गर्न को लागी अनुमति दिन्छ तर फुटपाथ मा।
मियामी मा, बिजुली स्कूटर एक काठी वा सीट संग कुनै पनी सवारी को रूप मा परिभाषित गरीएको छ, तीन पाels्ग्रा भन्दा बढी र प्रति घण्टा ३० माईल भन्दा बढी यात्रा को लागी डिजाइन गरीएको छैन। यदि तपाइँ मियामी शहर मा यस्तो एक वाहन संचालित गर्न योजना बनाइरहनुभएको छ, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ राज्य कानूनहरु लाई सन्दर्भ गर्नुहोस् किनकि त्यहाँ मियामी शहर मा सवारी को शासित कुनै विशेष कानून छैन। यदि तपाइँ वयस्क हुनुहुन्छ भने राज्यको कानूनले सार्वजनिक सडक र फुटपाथमा इलेक्ट्रिक स्कूटरको सवारीलाई वैध बनाउँछ। कुनै दर्ता, बीमा वा लाइसेन्स प्लेट आवश्यक छैन। प्रत्येक शहर ड्राइभरहरु लाई मात्र केहि स्थानहरु मा आफ्नो मोटरसाइकल स्कूटर सवारी गर्न को लागी अनुमति दिन्छ तर फुटपाथ मा।
क्यालिफोर्निया मा, चालकहरु कम्तीमा १ years बर्ष पुरानो हुनु पर्छ र एक वैध ड्राइभर लाइसेन्स वा कानूनी रूप बाट सार्वजनिक सडक मा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाउन को लागी शिक्षार्थी अनुमति लिनु पर्छ। कुनै दर्ता, बीमा वा लाइसेन्स प्लेट आवश्यक छैन। राज्य कानून मा सबै ड्राइभरहरु लाई चाहे उमेर मा एक हेलमेट लगाउन को लागी सवारी को आवश्यकता छ। साथै, १५ माइल प्रतिघण्टा भन्दा माथी बिजुली स्कूटर चलाउनुले टिकट दण्ड तिर्नु पर्ने हुन्छ। सबै इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु एक बाइकवे, ट्रेल वा साइकल पथ मा संचालित हुनु पर्छ, र एक फुटपाथ मा छैन। सडकमा, यो साइकल लेन मा संचालित हुनुपर्छ।
9. लस एन्जलस
यदि तपाइँ लस एन्जलस मा तपाइँको स्कूटर सवारी गर्ने योजना बनाइरहनु भएको छ, तपाइँ सबै राज्य कानून र माथी उल्लेखित नियमहरु को पालन गर्नु पर्छ। त्यस बाहेक, त्यहाँ शहर मा धेरै अन्य कानूनहरु छन् कि शासन गर्दछ जहाँ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को सवारी हुनु पर्छ। संक्षेप मा, लस एन्जलस को शहर फुटपाथ मा इलेक्ट्रिक स्कूटर सवारी अनुमति दिन्छ जब सम्म यो सम्पत्ति वा व्यक्ति वा सम्पत्ति को सुरक्षा को लागी एक बेइमान उपेक्षा संग गरीएको छ।
10. सैन फ्रान्सिस्को
यो सैन फ्रान्सिस्को मा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर संचालित कानूनी छ। नगर परिषद्ले यो कानूनी बनाएको छ किनकि विभिन्न शहर समुदायहरु को व्यस्त जीवन को। जे होस्, एक सवार को रूप मा, तपाइँ कम से कम १ years बर्ष को हुनु पर्छ र एक वैध ड्राइभर इजाजतपत्र वा कानूनी रूप बाट शहर को बाइकवे, ट्रेल, फुटपाथ वा साइकल पथ मा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाउन को लागी अनुमति लिनु पर्छ। सडकमा, यो साइकल लेन मा संचालित हुनुपर्छ। सिटी काउन्सिलले सवारी चलाउँदा हेलमेट लगाउनु पर्ने बाहेक सबै ड्राइभरहरुको आवश्यकता पर्दछ। किनभने सैन फ्रान्सिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबैभन्दा भीडभाड शहरहरु मध्ये एक हो, सवारहरु १५ माइल प्रति घण्टा भन्दा मा आफ्नो मोटरसाइकल स्कूटर सवारी गर्नु हुँदैन।
मँ आशा गर्दछु कि तपाइँ हाम्रो गहिरो समीक्षा पढेर आनन्द लिनुहुन्छ अफरोड स्कूटरहरु को सर्वश्रेष्ठ, वयस्क इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु र बच्चाहरु इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु को सर्वश्रेष्ठ सहित। मानिसहरु मा सवारी!
के खरीद गर्दा विचार गर्न को लागी - भारी वयस्क इलेक्ट्रिक स्कूटर
तपाइँ जान्न को लागी अचम्म लाग्नेछ कि चीजहरु भारी वयस्कों को लागी एक बिजुली स्कूटर को चयन गर्नु अघि प्रासंगिक छन्। यहाँ हामी सही इलेक्ट्रिक स्कूटर छनौट गर्नु अघि विचार गर्न को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरु लाई व्याख्या गर्न कोसिस गरेका छौं।
निर्माताहरु पनि औसत व्यक्तिहरु बाट प्रयोगकर्ता प्राथमिकता मा विचार गर्नुहोस्। भारी वजन प्रयोगकर्ता को लागी इलेक्ट्रिक स्कूटर औसत वयस्कों को तुलना मा वजन क्षमता मा अधिक ध्यान आवश्यक छ। त्यसैले निर्माताहरु भारी सवारहरु को लागी उत्पादन गर्दा स्कूटर मा वजन क्षमता मा अधिक ध्यान केन्द्रित। तपाइँ सजिलै संग बिजुली स्कूटरहरु पाउन सक्नुहुन्छ जुन २0० पाउण्ड बाट 90 90 ० पाउण्ड सम्म बजार भर मा भार उठाउन सक्षम छ। र हाम्रो व्यक्तिगत सुझाव आफ्नो शरीर को वजन बाट भारी वजन स्कूटर को लागी जाने हो। यो तपाइँ बिजुली स्कूटर मा वर्णित अधिकतम प्रदर्शन प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
जब यो भारी वयस्कों को लागी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को गुणवत्ता को निर्माण को लागी आउँछ, कुनै संदेह बिना, यो ठोस संरचित हुनु पर्छ। इलेक्ट्रिक स्कूटर को धेरै बनाइन्छ र यो हल्का बनाउन को लागी इस्पात वा एल्युमिनियम मिश्र धातु को उपयोग गरी परीक्षण गरीन्छ। हामी निकट भविष्य मा टाइटेनियम फ्रेम देख्न को लागी जो इस्पात को तुलना मा हल्का छ तर धेरै बलियो आशा गरीरहेका छौं। तर यस चरण मा, हामी सहमत छौं कि उनले निर्माण गुणवत्ता समग्र बिजुली स्कूटरहरु को लागी यति नराम्रो छैन।
२0० पाउन्ड भन्दा बढी को लागी भारी वजन सवारहरु को लागी, तपाइँ बिल्कुल निर्माण र तपाइँको अपेक्षित ई-स्कूटर मा प्रयोग गरीएको सामाग्री तपाइँ यसलाई किन्नु अघि विचार गर्नु पर्छ। तपाइँ पनी दृढता र sturdiness मात्र स्कूटर मा देखेर अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग हरेक स्कूटर उत्पादन विवरण र ग्राहक समीक्षा जो तपाइँ निर्णय गर्न को लागी तपाइँ को लागी अधिक उपयुक्त छ मद्दत गर्न सक्छ।
मोटर र पावर
मोटर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को मुख्य भाग हो कि गति, त्वरण, चढाई क्षमता, बिजुली खपत, र एक भारी सवार संग प्रदर्शन नियन्त्रण गर्दछ। सामान्यतया, बिजुली स्कूटर को अधिकांश एकल मोटर संग आउँछ जहाँ दुई संग एक शक्तिशाली। यदि तपाइँ एक भरपर्दो, आरामदायक र बजेट को अनुकूल इलेक्ट्रिक स्कूटर को लागी देख्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ एकल शक्तिशाली मोटर संग जान सक्नुहुन्छ। समर्थक र अनुभवी वयस्क सवारहरु को लागी दुई मोटर बिजुली स्कूटर अधिक आकर्षक र शक्तिशाली छ।
मोटर शक्ति इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु को लागी वाट मा मापाईन्छ र तपाइँ प्रायः 6000W बाट 20000W सम्म उपलब्ध पाउनुहुनेछ। तपाइँ स्थानीय कानून द्वारा पक्का हुन आवश्यक छ कि तपाइँ बिजुली को अधिकतम मात्रा संग बिजुली स्कूटर सवारी गर्न को लागी अनुमति छ। हामी भारी वयस्कों को लागी ३५० डब्ल्यू देखि ५00०० डब्ल्यू सम्म बिजुली को विभिन्न प्रकार संग केहि बिजुली स्कूटरहरु को माध्यम बाट गएका छौं।
यदि तपाइँ एक शुरुवात हुनुहुन्छ, हामी दृढता संग कम मोटर शक्ति बाट शुरू र गति मा ढिलो को सट्टा पागल गति संग एक उच्च संचालित मोटर मा हाम फाल्ने सुझाव दिन्छौं। जाहिर छ, भारी सवारहरु लाई एक नियमित स्कूटर बाट अधिक शक्ति र गति को आवश्यकता को रूप मा तौल प्रदर्शन मा भारी प्रभाव पार्छ। तेसैले तपाइँ तपाइँको अन्तिम छनौट गर्नु अघि, तपाइँ मोटर र पावर को राम्रो बिचार गर्नु पर्छ कि इलेक्ट्रिक स्कूटर संग आउँछ।
ब्याट्री र दायरा
कुनै फरक पर्दैन कती शक्तिशाली मोटर तपाइँ तपाइँको बिजुली स्कूटर को लागी छनौट गर्नुहुन्छ, यो लगातार मोटर चलाउन को लागी एक शक्तिशाली ब्याट्री को आवश्यकता पर्नेछ। त्यसैले यदि तपाइँ शक्तिशाली ब्याट्री ब्याकअप संग औसत मोटर शक्ति छ, तपाइँ राम्रो माइलेज, गति, र त्वरण पाउनुहुनेछ। त्यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर को लागी उपलब्ध ब्याट्री को तीन प्रकार छन्; सील लीड एसिड ब्याट्री, निकल मेटल हाइड्राइड ब्याट्री र लिथियम आयन ब्याट्री।
सील लीड एसिड ब्याट्री पछिल्लो दशकहरु को लागी शासक ब्याट्री श्रेणी थियो र निकल धातु हाइड्राइड ब्याट्री लामो समय को लागी मतलब छैन। लिथियम आयन ब्याट्री पल मा अग्रणी ब्याट्री प्रकार हो कि छिटो चार्ज, लामो समय सम्म र एक हल्का प्याकेज मा अधिक ब्याट्री जीवन को लागी एक उच्च शक्ति घनत्व छ। तर यो overcharge वा निर्वहन हुन बाट सुरक्षा को आवश्यकता छ। तपाइँको लागी हाम्रो सिफारिश टिकाऊ, लामो समय सम्म चल्ने र छिटो चार्ज गर्ने विकल्पहरु को लागी तपाइँको ई-स्कूटर को लागी लिथियम-आयन ब्याट्री को लागी जाने हो।
यसबाहेक, एक शक्तिशाली ब्याट्री राम्रो माइलेज वा दायरा आफ्नो इलेक्ट्रिक स्कूटर को रूप मा राम्रो संग दिनेछ। तपाइँ एक बिजुली स्कूटर बाट 30 मील को लागी 55 मील को लागी एक औसत लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यहाँ धेरै ई स्कूटरहरु छन् कि एक चार्ज मा १५० माइल भन्दा बढि दायरा दिन्छ। हेवीवेट सवारहरु को लागी, यो प्रदर्शन को रूप मा शक्ति, गति, र तौल को खपत को रूप मा वर्णन गरीएको छैन। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ एक बिजुली स्कूटर छान्नुहुन्छ कि 30 माइल दायरा दिन को लागी भन्नुहुन्छ, यो भारी वजन सवार को लागी 22-45 मील को दायरा सम्म समाप्त हुनेछ।
पाels्ग्रा र निलम्बन
पाels्ग्रा र निलम्बन तपाइँको आरामदायक सवारी अनुभव साथै सुरक्षा को लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छ। साथै, पा whe्ग्रा र निलम्बन सवार बाट लोड लिन र मोटर संग अन्तरक्रिया को लागी तपाइँको ई-स्कूटर को प्रदर्शन लाई अधिकतम बनाउन को लागी निर्माण गरीएको हो। यस प्रकार तपाइँ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर किन्नु अघि एक राम्रो विचार लिनु पर्छ, विशेष गरी भारी सवारहरु को लागी।
टायर सीधा सडक संग जोडिएको छ र तपाइँको बिजुली स्कूटर को समग्र प्रदर्शन लाई प्रभावित गर्दछ। उचित कर्षण र तपाइँको स्कूटर टायर को स्थिरता बिना, तपाइँ सवारी गर्दा धेरै मुद्दाहरुको सामना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मूल रूप देखि दुई अलग प्रकार को टायर को इलेक्ट्रिक स्कूटर जो वायवीय (हावा भरिएको) र ठोस को लागी उपलब्ध छन्। तपाइँ हनीकम्ब टायर भनिन्छ जुन पनी एक ठोस टायर हो टायर को अर्को प्रकार भर मा आउन सक्छ।
टायर को दुबै प्रकार को फाइदा र बिभिन्न परिस्थितिहरुमा हानि छ। वायवीय टायर धेरै लोकप्रिय, टिकाऊ, र अधिकतम सवारहरु को लागी अधिक आरामदायक छन् तर तपाइँ पंचर जो एक टाउको दुखाइ छ पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को तिर, ठोस टायर रबर संग भरिएको छ र फ्लैट टायर प्राप्त गर्ने कुनै मौका तर यो सजीलै बाहिर थकित र कम सदमे अवशोषण क्षमता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
तेसैले हामी सँधै तपाइँको इलेक्ट्रिक स्कूटर को लागी वा वायवीय टायर (निलम्बन संग वा बिना) को लागी जाने सिफारिश गर्दछौं किनकि यो प्रतिकूल सडक परिस्थितिहरुमा राम्रो काम गर्दछ। यसबाहेक, यो निलम्बन को एक विकल्प को रूप मा काम गर्दछ यदि तपाइँ तपाइँको ई स्कूटर मा कुनै छैन। यो राम्रो हुनेछ यदि तपाइँ दुबै वायवीय टायर र निलम्बन को सेट तपाइँको स्कूटर मा छ।
के बिजुली स्कूटर को डेक को बारे मा यति चिन्ता छ? हो, हामी सोच्दछौं कि यो केहि चीज हो जसको बारेमा तपाइँ सजग हुनु पर्छ। अधिकांश निर्माताहरु आफ्नो इलेक्ट्रिक स्कूटर को औसत प्रयोगकर्ताहरु को लागी feet फिट उचाई र लगभग २२० पाउण्ड को वजन को लागी उत्पादन गर्दछ। यदि तपाइँ एक भारी तौल सवार हुनुहुन्छ, यी जस्तै स्कूटरहरु तपाइँको खुट्टा को लागी फिट गर्न जाँदै छैनन्। एक बिजुली स्कूटर को एक डेक मंच हो जहाँ तपाइँ यसमा खडा हुनुहुन्छ। यदि तपाइँ डेक मा आरामदायक खडा हुनुहुन्न भने, तपाइँ या त सवारी को आनन्द लिनुहुनेछ।
सामान्यतया, डेक आकार ब्रान्ड देखि ब्रान्ड फरक र स्कूटर को डिजाइन मा निर्भर गर्दछ। एक बिजुली स्कूटर को एक सामान्य डेक आकार लम्बाइ मा 14 इन्च र चौडाई मा5इन्च को संदर्भित गर्दछ। साथै, धेरै बिजुली स्कूटरहरु खाली ठाउँहरु को बचत को लागी डेक मा ब्याट्री संग संकुचित राख्न र समाप्त गर्न रबराइज्ड बनावट को केहि प्रकार को उपयोग गर्न को लागी डिजाइन गरीएको हो। ताकि सवार प्लेटफर्म मा एक कडा पकड राख्न सकीन्छ जब सवारी गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सिफारिश सही र आरामदायक सन्तुलन को लागी तपाइँको स्कूटर को लागी एक फराकिलो डेक छनौट गर्न को लागी हुनेछ।
एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लागी वजन सीमा के हो?
एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को औसत वजन सीमा 420 पाउन्ड (200 किलो) छ। मोडेल मा निर्भर गर्दछ, अधिकतम वजन बोक्ने क्षमता 420 पाउण्ड देखि 980 पाउन्ड सम्म हुन्छ। यदि तपाइँ एक औसत भारित पुरुष वा महिला हुनुहुन्छ, तपाइँ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को वजन क्षमता को बारे मा चिन्ता गर्न को लागी ती मध्ये धेरै जसो तपाइँको लागी फिट हुनेछ। तर यदि तपाइँ एक भारी वयस्क हुनुहुन्छ, तपाइँ राम्रो संग एक ई स्कूटर को वजन क्षमता को रूप मा यो अधिक शक्ति, बलियो फ्रेम, ठुलो टायर आदि को जरूरत छ विचार गर्न आवश्यक छ।
के ठूला पाels्ग्राहरु एक इलेक्ट्रिक स्कूटर मा राम्रो छ?
पाels्ग्रा एक बिजुली स्कूटर को धेरै महत्त्वपूर्ण भाग हो। ठूला पाels्ग्रा, अधिक सान्त्वना र चिकनीपन एक सवार सवारी गर्दा महसुस हुनेछ। तपाइँ ठूला भन्दा सानो पाels्ग्राहरु मा अधिक टक्कर र झट्का महसुस हुनेछ। साथै, ठूला पाels्ग्रा साना पाels्ग्राहरु भन्दा राम्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर घुमाउन मद्दत गर्दछ।
प्राविधिक रूपमा, एक ठूलो टायर अधिक टोक़ र ढिलो बारी गर्न आवश्यक छ तर यो एक सानो टायर भन्दा छिटो स्कूटर सार्नेछ। अर्कोतर्फ, साना टायरहरुलाई कम टोक़ चाहिन्छ र ठुलो टायर भन्दा ढिलो सार्नु पर्छ। यदि तपाइँ खरिद वा टायर अपडेट गर्दै हुनुहुन्छ, ध्यानमा राख्नुहोस्, राम्रो आराम र नियन्त्रण को लागी बिजुली स्कूटर सवारी गर्दा ठूलो टायर को उपयोग गर्नुहोस्।
के यो भारी वयस्कहरु को लागी एक बिजुली स्कूटर किन्न लायक छ?
भारी वयस्कहरु को लागी इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु लाई अधिक शक्ति, बलियो फ्रेम, भारी निर्माण र गति को आवश्यकता छ, र औसत ई स्कूटरहरु को तुलना मा अधिक महँगो। ती मध्ये केहि सस्तो आउन सक्छ तर यो लामो समय सम्म एक भारी वजन सवार समर्थन गर्न को लागी पर्याप्त छैन। तर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर अझै भारी वयस्कों को लागी किन्न लायक छ। सार्वजनिक यातायात को यात्रा को लागत वा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर संग एक मोटरसाइकल वा निजी कार को सवारी को तुलना धेरै कम बिजुली को बिल को केहि डलर हो जो कल्पना भन्दा कम छ।
यसबाहेक, तपाइँ घण्टा को लागी ट्राफिक मा रहन वा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर संग हिड्ने क्षेत्र मा बाहिर खडा को बारे मा चिन्ता को आवश्यकता छैन। उनीहरु मध्ये धेरै हल्का र पोर्टेबल लगभग कहीं र शर्त मा बोक्न को लागी, यो पर्यावरण मैत्री परिवहन हो।
तपाइँ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लागी कस्तो प्रकार को ब्रेकि को आवश्यकता छ?
ब्रेकिking एक इलेक्ट्रिक स्कूटर सवार को सुरक्षा को लागी महत्वपूर्ण कार्यहरु मध्ये एक हो। त्यहाँ ब्रेकि of को दुई प्रकार छन्; डिस्क ब्रेकिंग र ड्रम ब्रेकिंग। डिस्क ब्रेकिaब्रेक प्रणाली को एक अधिक महँगो र नयाँ आविष्कार हो र ड्रम ब्रेकिंग भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ। विरोधी लक ब्रेकि system प्रणाली ब्रेकि system प्रणाली को अचानक प्रकार धेरै चिकनी र छोटो दूरी ब्रेक मा काम गर्दछ को नवीनतम प्रकार हो। शक्ति, गति, र स्कूटर को प्रकार मा निर्भर गर्दछ, ब्रेकि of को प्रत्येक एक यसको सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ।
कती सुरक्षित हेवीवेट सवार को लागी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर सवारी छ?
बिजुली र धेरै जसो दुई पाels्ग्रा ड्राइव भएकोले, बिजुली स्कूटर कोहि को लागी पुरा तरिकाले सुरक्षित छैन। सामान्यतया, अधिकांश ई-स्कूटरहरु डिजाइन र औसत शरीर को वजन को व्यक्तिहरु को लागी बनाईएको हो जब सम्म तपाइँ विशेष गरी हेवीवेट सवार को लागी बनाईएको छ। साना चोटहरु र भंग बिजुली स्कूटर सवार को लागी धेरै सामान्य छ। यी सुरक्षा दिशानिर्देशहरु को पालन गरेर र एक इलेक्ट्रिक स्कूटर सवारी गर्दा सुरक्षा गियर को उपयोग गरेर बच्न सकिन्छ।
एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को उपयोग गरी यातायात को एक वैकल्पिक तरीका को रूप मा यो कोरोना महामारी को अवधि पछि भारी विद्रोह छ। सामाजिक दूरी को कारण र सार्वजनिक यातायात मा भएको बाट बच्न को लागी, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर धेरै मानिसहरु को लागी छोटो दूरी को यात्रा को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका हो। एक भरपर्दो, सस्तो, र यात्रा को पर्यावरण मैत्री तरीका को रूप मा, विभिन्न स्तरहरु बाट मानिसहरु एक प्राप्त गर्न को लागी मर्ज गरीरहेका छन्। यहाँ हामी जो औसत को तुलना मा वजन मा भारी छन् र हाम्रो उपयोग को लागी सबै भन्दा राम्रो बिजुली स्कूटर को सिफारिश गर्न को लागी हाम्रो सबै भन्दा राम्रो कोसिस गरीयो को लागी केहि बिजुली स्कूटरहरु को समीक्षा गरीयो।
तपाइँको भ्रमण को लागी धेरै धेरै धन्यवाद, यदि तपाइँ हाम्रो उत्पादनहरु मा रुचि राख्नुहुन्छ, कृपया कुनै संकोच नगर्नुहोस् र मलाई कुनै पनि समय मा सम्पर्क गर्नुहोस्e, शुभकामना!
अघिल्लो: 2021 ठूलो इलेक्ट्रिक बाइक 20000w इलेक्ट्रिक स्कूटर वयस्क
अर्को: 20000W Foldable Brushless मोटर patinete electrico इलेक्ट्रिक स्कूटर
स्कूटर Electricas ， 10000w इलेक्ट्रिक स्कूटर old Foldable इलेक्ट्रिक स्कूटर
सबैभन्दा नयाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर patinetes electricos नयाँ ...
20000W Foldable Brushless मोटर patinete इलेक्ट्रिक ...
नयाँ शैली बोसो टायर स्कूटर electricos इलेक्ट्रिक ...
84V 15000w/10000w पदोन्नति इलेक्ट्रिक स्कूटर, sc ...
लिथियम ब्याट्री 84v 20000w मोटो टायर बिजुली sc ...
मूल 72v 20000w इलेक्ट्रिक स्कूटर bicicleta